राजधानी काठमाडाैका २ जनाको काेराेना संक्रमण भएकाे पुष्टी, कहाँबाट कहिले कसरी नेपाल आएका थिए उनीहरु ? — Imandarmedia.com
राजधानी काठमाडाैका २ जनाको काेराेना संक्रमण भएकाे पुष्टी, कहाँबाट कहिले कसरी नेपाल आएका थिए उनीहरु ?
काठमाडौं । काठमाडाै.काे पेप्सीकोलास्थित सनसिटी अपार्टमेन्टबाट अस्पताल भर्ना गरिएका दुई जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । एक जनाको भने रिपोर्ट आउन बाँकी रहेकाे छ । संक्रमण देखिएकाहरू २८ दिनअघि बेलायतमा फर्किएका बताइएकाे छ।
र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडिटी) गर्दा तीन जनाको रगतमा कोरोनाविरूद्ध लड्ने एन्टिबडी भेटिएपछि सोमबार उनीहरूलाई पाटन अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको थियो। हिजै थप परीक्षण गर्न उनीहरूको स्वाब टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाइएको थियो।
त्यहाँ पिसिआर मेसिनमा गरिएको परीक्षणमा दुई जनाको नतिजा पोजेटिभ देखिएको पाटन अस्पताल र प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएका छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका ८१ वर्षीया आमा र ५७ वर्षीय छोरामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो भने बुहारीको रिपोर्ट आउन बाँकी छ।
अर्थमन्त्री खतिवडा सनसिटी जानुभएको थिएन: प्रेस संयोजक पौडेल
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा केहीदिनअघि सनसिटी अपार्टमेन्ट गएको र संक्रमितसँग त्यतिखेर भेट भएको भन्ने खबर साँचो नभएको खतिवडाका प्रेस संयोजक यमन पौडेलले बताएका छन्। खतिवडाका छोरा सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने र केही समयअघि त्यहाँका बासिन्दाहरू आन्तरिक समितिको चुनावमा उनी सचिवमा निर्वाचित भएका थिए।
निर्वाचितहरूलाई बधाई दिने कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडा पनि गएको र त्यहाँ संक्रमितहरूसँग पनि उनको भेट भएको कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले दाबी गरेका छन्। ‘अर्थमन्त्रीको छोरा सनसिटीमा बस्नुहुन्छ, तर योबीचमा उहाँ सनसिटी गएको भन्ने कुरा झूटो हो,’ उनले भने,‘उहाँ एकदमै अनुशासनमा बस्ने व्यक्ति हो। अफिस र घरबाहेक अर्थमन्त्री कहीँ जानु भएको छैन। बाहिरका मानिससँगको भेट अत्यन्तै सीमित छ।’
चैत पहिलो साता लन्डनबाट आएका कोरोना संक्रमितहरूले अर्थमन्त्री खतिवडालाई कहिले र कहाँ भेटेका हुन् भन्ने खुलेको छैन। तीन जना कोरोनाको आशंका देखिएपछि झन्डै पाँच सय परिवार बस्ने पेप्सीकोलाको सनसिटी अपार्टमेन्टलाई सोमबारदेखि सिल गरिएको छ। उक्त अपार्टमेन्टमा बस्ने सबै जनाको कोरोना परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–९ काँडाघारीमा रहेको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका एक पुरुषलाई धुलिखेलस्थित उनकै घरमा प्रहरीले निगरानी गर्न थालेको छ । सो अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका एकै परिवारका २ जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित घर पुगेका ती युवामाथि प्रहरीले निगरानी थालेको हो ।
धुलिखेल नगरपालिका – ७ सरस्वती बजारका ती पुरुषको निगरानी गर्न हिजो साँझदेखि नै प्रहरी परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाले जानकारी दिए । ‘सूचना पाउनासाथ हिजैदेखि प्रहरीले निगरानी गरिरहेका छन्, उनको आज प्रहरीकै निगरानीमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्नेछौँ,’ प्रजिअ तिमल्सिनाले भने । कोरोना भाइरस देखिएका आमा, छोरा र बुहारी चैत ५ गते बेलायतबाट आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै नेपाल–भारत सीमा सिल र देशभर लकडाउन भएका बेला धरान आएका एक भारतीय नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । तीन दिनअघि धरान आएर लुकेर बसेको थाहा पाएपछि स्थानीयहरू सशंकित बनेका थिए ।
धरान–१५, बाँझोगरस्थित सदन रोडमा तरकारी व्यापार गर्ने बद्री चौधरीको घरमा आएका उनी लुकेर बसेको थाहा पाएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरीलाई खबर गर्नासाथ ती व्यक्ति भाग्न खोजेका थिए ।
लकडाउन र सीमा सिल भएका बेला ती भारतीय नागरिक कसरी धरान आइपुगे भन्ने खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीयले भने चौधरीको तरकारी बोक्ने मिनीट्रकमा लुकेर आएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।
ती भारतीय नागरिकलाई फुस्रेस्थित नेपाली सेनाले बनाएको क्वारन्टाइनमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । ती व्यक्तिको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिए उनी बसेको घरका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ ।